प्रोमार्क GPS GPS, पहिलो प्रभाव - Geofumadas
मे, 2010 जीपीएस / उपकरण, topografia
मैले यी खिलौनेहरू पहिले नै बक्सबाट बाहिर निकालेका छन् एक हप्ता हामी यो कसरी काम गर्छ भनेर हेर्न एक प्रशिक्षण गर्नेछौं। अहिलेको लागि, मैले मुश्किल भिडियोहरू र उनीहरूका केही विशेषताहरू देखेको छु।
प्रोमर्क3को भविष्यवाणी।
त्यहि लाइनमा, त्यहाँ त्यहाँ थिए र त्यहाँ अन्तिम छन्:
मोबाइल मेपर प्रो, एक राम्रो खेलौना जुन अमेरिकी $ १1,500०० को लागि थियो, र त्यो पोस्ट-प्रोसेसिंगको साथ सबमेटर प्रेसिजन प्राप्त भयो। यो एक बेस र एक रोभर पनि हुन सक्छ। यो हाल बन्द छ; यो कष्टप्रद थियो कि कार्ड स्टार्टअपमा डिकन्फिगर गरिएको थियो, सायद भाइरसको कारण, हुनसक्छ कम्पनीका कर्मचारीहरूको हडताल पछि एउटा त्रुटिको कारण।
मोबाइल मेपर CX, यो प्रो को एक अपग्रेड संस्करण हो, एक एन्टेना संग यो एक geodetic GPS को रूप मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। उसको सीई नामको नातेदार थियो, जो विन्डोज सीईमा दौडे, र मैले जे सुनेका थिए, यस सीएक्सको टाउको दुख्ने छैन।
मोबाइल मैपर 6, यो नयाँ लाइन हो, मैले धेरै पटक यो कुरा गरेको छु। अधिक वा कम बराबर हो Juno ट्रिम्बल, यद्यपि यो सटीकमा पार गर्दछ। यो बेस हुन सक्दैन, केवल एक रोभर र वास्तविक समयमा यो कमबख्त नेभिगेटर हो जुन to देखि meters मिटरको शुद्धताको साथ हुन्छ।
PM3 सँग नयाँ के छ
यसले6को विपरीतमा मोबाइल र म्यापिङ, क्यामेरा, कम्पास र थप पानाहरू ल्याउँछ, प्रो र सीएक्स जस्तै कार्यक्षमता ल्याउँछ। प्रो कोसिस गर्नेहरूका लागि, यो धेरै सरल छ किनभने सञ्चालन गर्ने तरिका एकै छ, मेनुमा धेरै कदमहरू सरल पार्दै, जुन किबोर्ड थपियो र छुँदा स्क्रिन यो बढी उत्पादन गर्दछ। RTK स्वागत र stakeout को समर्थन गर्दछ, मलाई यकीन छैन कि यदि यसले अरू अनुप्रयोगहरू समर्थन गर्दछ, जस्तै ArcPad, कि MM6 गर्न सक्दछ। निस्सन्देह, तपाईंले ल्याउनुहुने सफ्टवेयरको क्षमताहरू (फास्ट सर्वेक्षण) कन्फिगरेसन, बिन्दु प्रदर्शन र अन्य टाउको दुखाइको सन्दर्भमा मोबाइल म्यापिङको तुलना गर्दैन।
प्रो जस्तै, यो बेस वा रोभर हुन सक्छ, जोडी मा खरीद, र व्यावहारिक duffel झोलामा आउँछ। प्रत्येक एक antenna शामेल, वास्तविक समय मा यो submetric प्रेसिजन प्राप्त गर्दछ (प्रो प्रोसेसिंग पछि के गरे)। आधारको एक छोड्नाले सेन्टीमिटर सटीकता दिन सक्छ, यी आधार डाटाले MM6 लाई व्यायाममा देखाईएको अनुसार सबमेट्रिक्समा पुग्न सक्छ अघिल्लो.
सामानहरू मध्ये एक एडप्टर भनेको यसलाई एक ट्राइपडमा राख्नको लागि हो, अर्को पोलमा यसलाई समर्थन गर्न र पट्टि पनि हातमा यसलाई ठीक गर्नको लागि; एक टेप उपाय एन्टेना को उचाई लिन को लागी, USB / सिरियल जडान को विभिन्न रूप को लागी एक एडेप्टर। अन्य चीजहरू मध्ये, एन्टेनाको लागि केबल, पावरका लागि विभिन्न एडेप्टर, एसडी कार्ड र व्यक्तिगत वाटरप्रूफ ब्याग।
ब्याट्री लिथियमको हो, धेरै घण्टाको अवधिको साथ, पूर्ववर्तीहरूलाई पार गर्दै जुन एए प्रयोग गर्दछ; जोडीको खरीदमा एक बार आउँछ जुन उनीहरूलाई समान स्थितिमा राख्नको लागि उपयोगी छ "स्टप एन्ड गो" बाटोमा काम गर्दा। उनीहरूले मोबाइल म्यापर अफिस पोष्ट-प्रोसेसिंग सफ्टवेयर, संस्करण that. that ल्याउँछ जुन पहिले नै रास्टर डाटा समर्थन गर्दछ, म्यापिन्फो डाटासँग अन्तर्क्रिया गर्दछ, shp, dxf र csv; GNSS समाधानको रूपमा चिनिने अर्को डेस्कटप अनुप्रयोग, जसमा सर्वेक्षण योजना क्षमताहरू सामेल छन्। यो अन्तिम अनुप्रयोगसँग एक धेरै व्यावहारिक ईन्टरफेस छ, ड्र्याग-र-ड्रप विकल्पहरू, रिपोर्टहरू र आइसोमेट्रिक प्रदर्शनको साथ।
एक्सेसरीजमा सबै भन्दा राम्रो, स्प्यानिशमा भिडियोसहितको डिभिडि, यसलाई हेरेर तपाईले धेरै पढ्ने बचत गर्न सक्नुहुन्छ र व्यावहारिक तरिकामा यसलाई कसरी काम गर्दछ भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ; यद्यपि म्यानुअल पनि धेरै उपयोगी छ। भिडियो प्रशिक्षणको लागि आदर्श हो, एक सेक्सन सहित जसले उपग्रह नक्षत्रहरूले कसरी काम गर्दछन् र रिसेप्शनलाई असर गर्ने पक्षहरू समावेश गर्दछ। यसले विषयहरू पनि समावेश गर्दछ:
जीपीएसको सञ्चालनको परिचय
स्थिर लिफ्ट कसरी गर्ने?
रोक्नुहोस् र उठाउने र क्यामेराटोनिकहरू जानुहोस्
क्षेत्र सर्वेक्षण सफ्टवेयर
मोबाइल म्यापर कार्यालय र अन्य कार्यालय सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै
GIS डाटा क्याप्चर र प्रबन्ध गर्दै
मूल्यहरु मा स्थानीय आपूर्तिकर्ता निर्भर, त्यसैले म मेरो वातावरणमा परामर्श, मोबाइल नक्साङ्कनकर्ता प्रो अमेरिकी $ 1,500 हिंडे, यो MM6 को 1,200 र Promark3 नजिकै भित्र हिँड्छ $ 6,000 जोडा। खराब छैन यदि तपाईं सेन्टीमीटर शुद्धता हासिल गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ भने, अन्य ब्रान्डहरूले यस मूल्यको लागि यस्तै उपकरणहरू प्रस्ताव गर्दैनन्।
यदि मलाई यो कम्प्यूटर संग तुलना गर्न को लागी थियो, यो भन्यो कि यो लगभग जस्तै छ Trimble GeoXH, यद्यपि तिनीहरू बिल्कुल बराबर छैनन्।
अर्को के हो?
गरौं एक कोर्स यस स्टेशनमा कूल स्टेशनका केटाहरू र केही साथीहरू नि: शुल्क सिक्नको लागि इच्छुक छन्। हामी केहि पक्षहरू जस्तै परीक्षण गर्न रुचि राख्छौं:
नगरपालिकाहरूमा उपलब्ध उपकरणहरूसँग कुन परिस्थितिमा समान परिस्थितिहरू छन्: MMPro र MM6, दुई Promark3 को RTK सँग तुलना।
कुन वास्तविकता वास्तविक समयमा प्राप्त गर्न सकिन्छ र function हेक्टेयर भन्दा ठूला सम्पत्तीहरूमा समान परिस्थितिमा गार्मीन लीजेंड चलाउन कत्तिको कार्यात्मक हुन्छ।
सटीकताको त्यो हानि दूरीमा छ: 100 मिटर, एक, तीन र6किलोमिटर।
उही समयमा, एक पटक र सबैका लागि, हामी दूरी मिटरहरू परीक्षण गर्नेछौं जुन मेरो विचारमा सुअन्टो कम्पासलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दछ यदि शहरी क्षेत्रहरूमा पर्याप्त त्रिकोणित छ भने। परिक्षणको आधारमा हामी निर्णय गर्दछौं कि ग्रामीण सर्वेक्षणको प्रयासलाई कसरी अनुकूलित गर्ने जुन जुन देखि सेप्टेम्बरसम्म लिन्छ।
हामी कसरी जान्छौं त्यो कसरी जान्छ
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो एन्ट्रेमर्स खानको भ्रमण
अर्को पोस्ट संस्करण भिन्नता MobileMapper कार्यालय र MobileMapper कार्यालय 6अर्को »
Rep 47 जवाफ "प्रोमार्क GPS GPS, पहिलो प्रभाव" लाई
दसहोम प्रोमर्क32007 र काम गर्न को लागी केवल अगाडी बढाने को लागि, उपग्रहहरु को रूप मा देखने को लागि डराएगा।
हो bisogno di un promark3 नियंत्रक फास्टसर्वे र बाँच्ने प्रति winCE 4.0 ripomax yahoo.it paypal pay UGGENT Shipping to italy
andres c भन्छिन्:
नमस्ते, मसँग प्रोमार्क3म्यागेलान छ र म मेडेलिन कोलम्बियामा बस्दछु; म उपकरणहरू कहाँ राख्छु र अपडेट गर्न सक्छु?
वा मसँग जसलाई म अर्को देशमा पठाउनको लागि म सम्पर्क गर्न सक्दिन किनकी म टोलीसँग काम गर्दछु र म तुरुन्तै आवश्यक हुन्छु
म तपाईंको जवाफको प्रतीक्षा गर्नेछु
म जान्न चाहन्छु कि म जीपीएस प्रवर्द्धक3को स्क्रीनमा तस्वीर कसरी देख्छु नियन्त्रण बिन्दुमा
रिकोर्ड आईएसएमएल मोन्टेकिनोस गोंजेलीज भन्छिन्:
मलाई थाहा छ कि कसरि रबर्ट र बेस को लागि कन्फिगर गर्न को लागि, र कसरि विंडोज 8.1 मा जादुई अंकहरु डाउनलोड गर्न को लागि
म विन्डोज 8 जीपीएस मा बुँदाहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र रबर्ट कन्फिगर यदि र कसैले मलाई मदत जस्तै कृपया आधार हुन जान्नु आवश्यक
pedro gomez भन्छिन्:
म एक 220 प्रोमर्क जीपीएस छ यो रिसेट हो र अब यो जब म यसलाई चालू गर्दछ पहिलो स्क्रिन पहिले चल्दैन जुन मैले गर्न सक्छु
युआन मनुल कामाको अर्मा भन्छिन्:
म यी अवस्थामा उपकरण चाहनुहुन्छ तर यो यसको स्थापना निर्देशन बढी जानकारी, तर पनि सानो पाठ्यक्रम भेटी गर्न महत्त्वपूर्ण छ, म पनि यो नयाँ वा preowned अग्रिम धन्यवाद यो जानकारी धन्यवाद, लागत कति जान्न चाहन्छु।
walter amezquita भन्छिन्:
नमस्कार म तपाईंको उपकरणको बारेमा प्रयोगको समय बारेमा जान्न चाहन्छु, फाइदाहरू र यदि तपाईं आफ्नो उपकरणका केहि थप छविहरू र सबै मूल्य भन्दा माथिको गर्न सक्नुहुन्छ।
म एक PROMARK3उपकरण प्रयोग गरिरहेको छु। यदि तपाइँ मन पराउनुभएको छ र यदि तपाईले प्रयोग गर्नु भएको छ भने, यो निःशुल्क छ। PRICE लाई जारी राख्नुहोस्। म कोलम्बियामा भेटिन्छु। इमेल: fotopacho1hora@yahoo.es
तपाईं आफ्नो देश मा Topcon / Magellan डीलर संग यो गर्न सक्नुहुन्छ।
म Promark100 पहिले नै मैगलन द्वारा कुनै भविष्य छ कि एक श्रृंखला छ किनभने तपाईं एक मोबाइल नक्साङ्कनकर्ता3वा जस्तो केहि राम्रो जाने सुझाव।
अहम खैर बाराहोन भन्छिन्:
एक जीपीएस प्रमर्क को भविष्य मा रुचि राखयो3rtk सबै यसको उपसाधन संग धन्यवाद।
Robinson Vargas भन्छिन्:
नमस्ते, मसँग सामानहरू, सफ्टवेयर र प्रशिक्षणको साथ PMK3 (of महिनाको प्रयोगको) जोडी छ। म बुकारामंगा (सेडर-कोल) मा ११'०००,००० (कोलम्बियाई पेसोस) मा छु।
jc zemernots भन्छिन्:
म लाठी र केबल हिड्ने एक3promark छ र म एन्टेना चोरी गरेको छ, म सामान यो मेरो काम गर्न धेरै आवश्यक छ किनभने brebedad प्राप्त गर्न उद्धरण। धन्यवाद।
हामी उपकरण वा सामान वितरण गर्दैनौँ।
सब भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि तपाईं आफ्नो देशको वितरकको साथ उद्धरण गर्नुहोस्। कहिलेकाँही हामीले वितरकलाई सम्पर्क गरेका थियौं, जहाँ कोलम्बियाको जस्तो कुनै वा निष्क्रिय छैन। तर यो असाधारण मामलाहरूमा भएको छ।
शुभ दिउँसो, तपाईं प्रोमर्क उपकरण3को लागि एक एंटीना केबल उद्धृत गर्न सक्नुहुनेछ
Adalberto Barrera कास्टन भन्छिन्:
म prommark3प्रयोग स्पेनिश मा भिडियो संग डीभिडी प्राप्त गर्न सक्छन् जहाँ तपाईंले मलाई निकै धन्यवाद adalberto बाधा Castan ing आफ्नो जानकारी atte मूल्यांकन बेच्न सक्नुहुन्छ
मलाई लाग्छ कोलम्बियामा कुनै अष्टेच वितरक छैन। तपाईंले नजिकैको आपूर्तिकर्ता फेला पार्नुपर्नेछ, सायद पनामा वा भेनेजुयला।
प्रोमर्क3कम्प्युटर हो जुन बन्द गरिएको छ, त्यसैले म तपाईंलाई नयाँ विकल्पहरू हेर्नुहोस् जस्तै प्रोमर्क 100 वा मोबाईल मैपर 100
म प्रोमर्क3को मूल्य जान्न चाहन्छु म कोलम्बियामा छु र म कहाँ पुग्छु
सजिलो चीज यो तपाईंको स्थानीय थाला आपूर्तिकर्ताको साथ जाँच गर्न हो
फर्नन्दो लोपेज लोजडा भन्छिन्:
मैले जिपिएस एन्टेना मार्क प्रोमार्क्सनक्स एक्स थैल्स कोलोमबियाअअअअअअअअअअअआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआआ।
मैले जिपिएस एन्टेना मार्क प्रोमार्क्सएक्सनम्क्स थलेस कोलम्बियाको बोली आवश्यक छ।
Ashtech मोबाइल मैपर 200
नमस्ते .. म के जीपीएस (TRIMBLE-asttech) जान्न चाहनुहुन्छ म उपग्रह स्वागत सबै भन्दा राम्रो छैन त धेरै रूखहरू छन्, म कोलम्बिया गरेको स्थान वर्णन धेरै कुनै न कुनै छ बस्नुहुन्छ, अधिक सही भूमि मापन गर्न सिफारिस, तर म यी गर्न चाहनुहुन्छ submeter जीपीएस संग लिफ्टहरु म परिणाम कुल स्टेशन (साथ मापन यदि शुद्धता धेरै पक्षहरू बाट भिन्न र जीपीएस को कहिल्यै शुद्धता एक स्टेशन को बराबर हुनेछ, तर म नजिक हुन्छ के जान्न चाहनुहुन्छ रूपमा के यो सही हो, धन्यवाद
तपाईंसँग के कामका लागि मेरो ट्यूटोरियल छैन।
तर जब तपाइँ ती उपकरणहरू किन्नुहुन्छ, त्यहाँ मूलभूत वर्णनहरूको भिडियोहरू छन्।
युआन जेमेन्ज भन्छिन्:
म प्रोमार्क3उपकरण, RTK अपरेशन, सफ्टवेयर र सबै सामानहरूको एक जोडी खरीद गर्न चाहन्छु, यदि तपाईंसँग कसरी यो कार्य गर्दछ भनेर ट्यूटोरियल छ भने। भुक्तानी विधि म भेनेजुएलामा छु।
जुआन अलेजज्रो गार्जन पिटि भन्छिन्:
अभिवादन, मैले एकल GPS प्रोमार्क3थलेस किन्नु पर्छ, L1 टाइप गर्नुहोस्, म यसको मूल्य जान्न चाहान्छु, केवल जीपीएस चाहिन्छ, अन्य तत्वहरू छैनन्। म तपाईको सहयोगको लागि धन्यवाद दिन्छु।
खैर, जान्न गाह्रो, सबैभन्दा सुरक्षित कुरा केबल यो जडान भएको ठाउँमा बिग्रिएको छ, त्यसैले यो ह्यान्डल हुँदा संकेत हराउँछ। तिनीहरू धेरै कमजोर छन्।
खास गरी मैले रोक र गो मोड धेरै व्यावहारिक नहीं पाएको छ, किनकी सिग्नल सजिलै संग बाधाहरु या अनियमित इलाके मा स्थानों मा हराएको छ।
नमस्ते, क्वेरीको रूपमा मलाई यो जान्न आवश्यक छ किन3प्रमार्क यसलाई प्रयोग गर्दा र दुबै कीनेटिक सर्वेक्षणहरू प्रदर्शन गर्दछ र रोक्नुहोस् र मलाई "लिंक हानि" को बारेमा सतर्क गराउनुहोस् र "बाह्य एन्टेना जडान दर्ता गर्न सक्दैन" वा त्यस्तै केहि चीज। । प्रत्येक चोटि यो मेरो पीसी मा डाटा डाउनलोड को समय मा हुन्छ पोइन्ट्स राहत को सम्मान मा धेरै विस्थापित छन्। धन्यबाद! अर्जेन्टिना बाट
तपाईं केवल एक सँग डाटा संकलन गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसपछि पोस्ट प्रोसेस प्रोग्राम (मोबिल म्यापर अफिस) को साथ तपाईं इन्टरनेटमा उपलब्ध रेन्नेक्स आधारहरूको सम्बन्धमा पोस्टप्रोसेसि। गर्नुहुन्छ। कठिनाई हुन सक्छ कि तपाईले आफ्नो सर्वेक्षण क्षेत्रको नजीक बेसहरू फेला पार्नुहुन्न।
अल्भारो ग्राहम भन्छिन्:
हार्दिक अभिवादन हालसालै मसँग प्रोमिकर एक्सएनयूएमएक्स छ र म यो जान्न चाहन्छु कि म एउटा टोपोग्राफिक सर्वेक्षण गर्न सक्छु कि मलाई थाहा छ यो कार्टोगाफ्रियाको रूपमा गर्न सकिन्छ तर यसले मलाई उत्थान दिदैन, सर्वेक्षण मलाई चाहिने सटीकको आवश्यकता पर्दैन र म यसलाई पोस्ट प्रोसेसिcessमा गर्न चाहन्छु, धन्यवाद म यसलाई धन्यवाद Alvaro ग्राहम गर्न सक्नुहुन्छ
यदि तिनीहरूले प्रस्ताव चाहन्छन् भने, उनीहरूले देशलाई छोडेर जहाँ तिनीहरू बस्छन्।
रोनाल्ड जमोरा सेविला भन्छिन्:
मलाई थाहा छ यदि तपाईं मोबाइल mapper प्रो को बाहिरी एन्टेना को लागि एक केबल प्राप्त गर्न सक्छन् र किनकी
उदाहरण को लागी तपाइँ ProMark3 उद्धृत गर्न र केहि क्याटलग दिन सक्नुहुन्छ
म एउटा वास्तुकार हुँ
रोजर Hernandez को इमेल के हुनेछ ?? तपाईंको एन्टेना केबल संग के गरिसक्यो को लागी केहि सिग्नल छोड्नुहोस्
अभिवादन ... म कसरी स्प्यानिशमा छिटो सर्वेक्षण सफ्टवेयर पाउन सक्छु? म मेरो मेलमा संकेतहरूको प्रतीक्षा गर्छु ... धन्यवाद
नमस्ते जोह, मैले तपाईंको अनुरोध र मेल पठाउनुभएको म्यागेल प्रतिनिधिमा तपाईंको साथ सम्पर्कमा छु।
शुभ प्रभात, म तपाईलाई मेरोलागि प्रमर्स g जीपीएस उपकरणको उद्धृत गर्न चाहन्छु, सकेसम्म छिटो किन्नको लागि। …। धन्यवाद
ठिकै छ, यो निकै राम्रो भयो, म परिणामहरू लेख्न केहि समय लिन चाहन्छु। यस उपकरणको प्रयोगमा केहि सामान्य गल्तीहरू कागजात बाहेक।
र यो कसरी गयो? : -एस
नमस्ते लुइस, कुन देशमा तपाईं हो, थाहा पाउनु कुन वितरक तपाईंलाई पठाउन।
मलाई एक पूर्ण उपकरण किन्न चाहन्छु भन्छिन्:
कृपया चाँडै उद्धरण गर्नुहोस्
मैले कोलम्बियालाई समर्थन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई इमेल पठाएको छु, जस्तै जस्तो कि जस्तो कि त्यो देशमा हालको वितरक उपलब्ध छैन।
रोजर हेरान्डेज भन्छिन्:
राम्रो अवसर। कृपया मलाई मनपर्दछ कि म एउटा अन्टेना केबल एउटा प्रममार्क एक्सएनम्क्स थैल्स जीपीएसका लागि गर्छ र यसमा बोगोटा - कोलम्बिया जानको लागि ढिलाइ छैन
धन्यवादको लागि धन्यवाद।
कृपया मलाई यो प्रायः आवश्यक छ।